အဆိုပါဆေးထိုးတန်ဆာစက်မှုလုပ်ငန်းလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်နှင့် 2016 ခုနှစ်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆေးထိုးတန်ဆာစက်မှုလုပ်ငန်းမှာတန်ဖိုးထားခံရဖို့ခန့်မှန်းခဲ့သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 283,54 ဘီလီယံအထိ.
polypropylene များအတွက်စာရင်းကိုင်အများဆုံးအသုံးပြုကုန်ကြမ်းခဲ့သည် 36% နှင့်အတူကို ABS အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, စုစုပေါင်းဝယ်လိုအား၏ 25% 2016 ခုနှစ်ဝယ်လိုအား။
အဆိုပါအာရှပစိဖိတ်ဆေးထိုးပုံသွင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်လိုအားကြီးစိုးခြင်းနှင့်စပါးကိုရိတ် 37% 2016 ခုနှစ်စုစုပေါင်းဝယ်လိုအား၏။
အများအားနေ့စဉ်ဘဝများတွင်အသုံးပြုထားသည့်အတော်များများကထုတ်ကုန်ထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ injection တန်ဆာအလွန်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှုန်းထားများမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များလာပြီများအတွက်စံပြထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
injection တန်ဆာစက်မှုလုပ်ငန်းအဆကြီးထွားလာသည်။ injection တန်ဆာ ပို. ပို. မျိုးစုံထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနေပါသည်။
Injection molding isavery အကျိုးရှိစွာ manufacturing process. The process is highly automated and controlled by robotics and machines which can be very easily controlled and managed by an operator.
Due to the highly consistent manufacturing process, it is much easier to ensure consistency in products and brands. Injection molding provides an almost အမှား-အခမဲ့ manufacturing process.
အဆိုပါ quality of the products is another benefit of injection molding. The products manufactured are lightweight and durable.
Products manufactured using injection molding are not joined or welded, rather they are made fromasingle mold. This increases the impact-resistanceနှင့် ဆန့အစှမျးသတ်တိ of the products.
Manufacturing using injection molding is very ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော. The major part of the expenses and resources are consumed during product designing and designing of the production molds.
However, injection molding provides the flexibility to manufacture products usingaပေါင်းစပ် of plastic polymers. They can select the best combination of raw materials which will provide them with the desired quality of the product based on its intended use.
Injection molding process has changed and evolved considerably over time. The industry is becoming eco-friendlierနှင့် sustainable. The latest production processes lead to very less scrap plastic during production.